वामदेवको डोल्पा जाने बाटो बन्द, सांसद बन्ने अवको बाटो ! – Fewa Times
कलेज जाँदै गरेकादुई छात्रालाई सुमोले ठक्कर दिँदा घाईते, विपी राजमार्ग अवरुद्ध-नक्कली नोटसहित तीनजना पक्राउ-पोखरीमा भेटियो, महिलाको शव-आफैले चलाएको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु-विद्यार्थीहरु काँप्ने, मुर्छा पर्ने, चिच्याउने, रुने गर्न थालेपछि विद्यालय बन्द-मिनीट्रकको ठक्करबाट ८० वर्षीय वृद्धको मृत्यु-आईतबार सम्म वर्षा र हिमपात हुने सजग रहन मौसमविद्को आग्रह-भूकम्पले चर्केको घर भत्किँदा ८५ वर्षीय वृद्धको ज्यान गयो-बहुविवाह गर्नेलाई एक वर्ष कैद-नेविसङ्घ अध्यक्ष महरसहित सात पक्राउ
वामदेवको डोल्पा जाने बाटो बन्द, सांसद बन्ने अवको बाटो !
प्रकाशित मिति: September 11, 2018 8:46 am
भदौ २६, काठमाडौं – डोल्पाका निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा दिन लगाएर उपनिर्वाचनमार्फत संसद्मा आउने नेकपाका नेता वामदेव गौतमको योजनामा तुषारापात भएको छ । पर्यटन राज्यमन्त्रीसमेत रहेका डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढाले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका छन् ।
सांसद बुढा सुरुमा राजीनामा दिएर वामदेवका लागि ठाउँ खाली गर्न सकारात्मक देखिएका थिए । उनी ‘वामदेवको पक्षमा माहोल बनाउने’ भन्दै जिल्ला पनि गएका थिए । तर, काठमाडौं फर्केपछि उनी ‘मतदाताको दबाबका कारण’ राजीनामा नदिने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
पछिल्लो समय बुढाले राजीनामा दिनैपरे पनि फागुन–चैततिर मात्रै उपयुक्त वातावरण बन्ने सुनाउन थालेको नेकपाका एक नेताले बताए । त्यतिखेरसम्म पार्टी कमिटीसँगै जनवर्गीय संगठनको पनि एकता भइसक्ने भएकाले निर्वाचन जित्न सजिलो हुने उनको तर्क छ ।
७ देखि १४ भदौसम्म जिल्ला घुमेका बुढाले मतदातासँग साक्षात्कार गर्दै भदौ दोस्रो साता सांसद पदबाट राजीनामा दिने घोषणा पनि गरेका थिए । तर, मतदाताले उनलाई राजीनामा नदिन दबाब दिए । काठमाडौंमा रहेका डोल्पाली युवाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर राजीनामा नदिन थप दबाब दिए । उनीहरूले राजीनामा दिए मत बहिष्कार गर्नेसम्मको धम्की दिएपछि बुढा पछि हटे ।
सांसद बुढाले डोल्पामा त्रिपुरासुन्दरी र ठूलोभेरी नगरपालिका क्षेत्रका कार्यकर्तासँग धेरै छलफल गरे । माथिल्लो डोल्पाका आफ्ना पार्टीनिकट जनप्रतिनिधिलाई दुनैमा बोलाएर छलफल गरे । दुई नगरपालिकाका धेरै मतदाता भएको क्षेत्रमै पुगेर अन्तत्र्रिmया गरे । दुवै नगरपालिका प्रमुख तत्कालीन एमालेबाट विजयी भएकाले बुढाले माहोल बनाउन बल गरेका थिए । तर, मतदाताले राजीनामा नदिन सुझाब दिए । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।
दुबै हात नभएकी मेघालाई बिनु शाक्यले गरिन यति ठुलो सहयोग (हेर्नुहोस् भिडियो)
समायोजन लगत्तै नयाँ भर्ना खुल्नेछ : मन्त्री पण्डित
मौसम बदली : काठमाडौँमा वर्षा
यो एक वर्षमा त देशको यो हालत छ भने अझै चार वर्ष यसैगरि चलाउँदा देशको हालत झन के होला ? : गजुरेल
काठमाडौं – पछिल्लो समयमा बिजुलीको करेन्ट लागेर हात खुट्टा गुमाएका व्यक्तिहरु एक पछि अर्को गर्दै लगातार......
फागुन ४, काठमाडौँ – सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजन सकिएपछि......